दुई दिन धाएर, ५ कोठाको चक्कर काटेपछि बल्ल लाइसेन्स आवेदन :: निर्मला घिमिरे :: Setopati
दुई दिन धाएर, ५ कोठाको चक्कर काटेपछि बल्ल लाइसेन्स आवेदन
ललितपुरको एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको लाम। तस्बिर: निर्मला घिमिरे/सेतोपाटी
नुवाकोटका राजकुमार श्रेष्ठले मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन अनलाइन फारम भरेका थिए। फारम भर्ने बेलामै उनलाई कात्तिक २९ गते सोमबार यातायात कार्यालयमा सम्पर्क गर्नू भनेर तोकिएको थियो।
उनी लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि सोमबार बिहानै ठूलो भर्‍याङस्थित यातायात कार्यालय पुगे।
आफूले भरेको अनलाइन फारमको फोटोकपी र नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी बुझाएपछि सोधपुछ कक्षबाट टोकन प्राप्त भयो। त्यो टोकन लिन उनले केही बेर धकेलाधकेलको सामना त गर्नुपरेकै थियो।
जसै टोकन हात पर्‍यो, उनी बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न कोठा नम्बर १ मा गए। त्यहाँ उनीभन्दा अगाडि झन्डै दुई सय जनाको लाम थियो। बायोमेट्रिक परीक्षण गर्ने कर्मचारी भने जम्मा दुई जना थिए।
ती दुई जनाले दिनकै करिब पाँच सय सेवाग्राहीको फोटो खिच्दै, दुवै हातका बूढी औंलाको ल्याप्चे लिँदै र दस्तखतसमेत संकलन गर्नुपर्थ्यो।
त्यसमाथि यातायात कार्यालयको कम्प्युटर सर्भर हरेक आधा घन्टामा एकचोटि ह्यांग हुन्थ्यो।
राजकुमार टोकन हातमा लिएर कुरेका कुर्‍यै थिए, उनको पालो आउने नामनिसान थिएन।
लगभग तीन घन्टाको प्रतीक्षापछि उनको पालो आयो। उनले बायोमेट्रिक कक्षमा फोटो खिचाए, विद्युतीय ल्याप्चे लगाए र दस्तखत गरे।
त्यहाँबाट कोठा नम्बर २ मा स्वास्थ्य परीक्षण निम्ति लाम बस्ने पालो आयो।
त्यहाँ पनि भीड उस्तै थियो।
झन्डै आधा घन्टामा स्वास्थ्य परीक्षण पास गरेर उनी कोठा नम्बर ३ मा रहेको बैंक काउन्टरमा ५ सय रूपैयाँ राजस्व तिर्न गए।
दु:खको कुरा, उनी पुग्नुभन्दा करिब एक घन्टाअगाडि नै बैंक काउन्टर बन्द भइसकेको रहेछ।
बैंकका कर्मचारीले ढुक्कैसँग भने, 'अब भोलि बिहान १० बजे आउनुस्।'
'बिहानै आउँदा पनि आधा काम सकियो। बैंक काउन्टर साढे दुई बजे नै बन्द हुने रहेछ। अब भोलि पनि दिनभरि लाग्ने होला,' राजकुमारले दिक्क मान्दै भने, 'एउटा लाइसेन्स निकाल्न यत्रो झमेला! दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नै दुई दिन लाग्दो रहेछ, लाइसेन्स हात पर्ने त कहिले हो!'
मंगलबार हामीले उनलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्यौं। अघिल्लो दिन काम नभएको सम्झिएर उनी कार्यालय खुल्नुभन्दा अगाडि नै पुगेका रहेछन्।
'आज (नेपाल) बन्द भएर होला, भीडभाड केही कम थियो,' उनले भने।
'कोठा नम्बर ३ मा राजस्व बुझाएपछि तपाईंले के गर्नुभयो त?' हामीले सोध्यौं।
उनका अनुसार राजस्व बुझाएपछि त्यसको रसिद लिन कोठा नम्बर ७ मा लाम बस्नुपर्दाे रहेछ। एउटै कामका लागि दुई-दुई ठाउँमा लाम!
यति मात्र कहाँ हो र! त्यो रसिद देखाएर लाइसेन्स परीक्षाको मिति थाहा पाउन फेरि कोठा नम्बर ८ मा लाम बस्नुपर्दो रहेछ। हरे!!
'एउटै कोठाबाट सकिने कामको लागि किन यताबाट उता, उताबाट उता दौडाएको होला,' उनले भने, 'बरू कर्मचारी कम भए थप्नु नि! दिनकै चार-पाँच सय मान्छे आउँछन् भन्ने थाहा पाएपछि त्यहीअनुसार कर्मचारी बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेर कार्यालयलाई थाहा छैन!'
यस्तै अनुभव नैकापबाट आएकी अस्मिता कार्कीको छ। उनी पनि राजस्व बुझाउने झ्यालमा पुग्दापुग्दै समय सकिएको बताउँछिन्।
'दिनभरि लाइन बसेर पनि पालो आएन,' उनले निराश हुँदै भनिन्।
यातायात कार्यालयका सबै सेवाग्राहीको यही गुनासो छ। त्यहाँ बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा गराउँदै राजस्व तिर्ने काउन्टर बन्द हुन्छ।
'अरू कोठा जति बेलासम्म खुल्छ, राजस्व काउन्टर पनि त्यति बेलासम्म खुल्नुपर्ने होइन र!' अस्मिताले भनिन्, 'एउटा काउन्टर अगाडि नै बन्द गरिदिँदा सेवाग्राहीले एक दिनमा हुने कामलाई दुई दिन खर्च गर्नुपर्छ।'
हामीले यसबारे काउन्टरका कर्मचारीसँग सोध्दा उनीहरूले जाडो याम भएकाले छिट्टै काउन्टर बन्द हुने बताए।
ठूलो भर्‍याङ कार्यालयमा मात्र होइन, उपत्यकाका अरू यातायात कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीहरूलाई यस्तै झमेला छ।
ललितपुरको एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा भेटिएका कमल ओलीले लाइसेन्स परीक्षाका लागि निकै सास्ती झेल्नुपरेको बताए।
छाउनीदेखि गाडीको लाइसेन्स लिन आएका उनी दिनभरि एउटा कोठाबाट अर्को कोठा धाउँदा धाउँदा निकै थकित भेटिएका थिए। 'एउटाले यता भन्छ, अर्कोले उता भन्छ। यताउता धाउँदा धाउँदै हैरान हुने रहेछ,' उनले भने।
एकातिर सेवाग्राहीहरूले दु:ख पाइरहेका छन्, उता ठूलो भर्‍याङस्थित यातायात कार्यालय प्रमुख सञ्जय थापा भने 'आफूहरूले सेवाग्राहीलाई नफर्काउने गरी सेवा दिइरहेको' जिकिर गर्छन्।
'राजस्व हामीले लिने होइन, बैंकले लिने हो। अरू प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै काउन्टर बन्द भयो भने फर्किनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ तर त्यसमा बैंकको भूमिका हुँदैन,' उनले भने।
उनका अनुसार ठूलो भर्‍याङ कार्यालयमा मात्र दैनिक पाँच सय जनाले नयाँ लाइसेन्सको आवेदन दर्ता गर्छन्। यसबाहेक दैनिक दुई सय नवीकरण र २० जना प्रमाणीकरण गर्न आउँछन् भने ट्रायल पासको राजस्व कट्टी गर्न आउने सय जनाजति हुन्छन्।
नयाँ दर्ता भएकालाई साताको दुईपटक लिखित परीक्षा लिने गरेको उनले बताए। 'चापअनुसार कर्मचारी कम हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हो,' उनले भने।
एकान्तकुना यातायात कार्यालय प्रमुख राजुभाइ कुस्मा पनि सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप र कर्मचारी संख्या कम हुनाले समस्या आएको बताउँछन्।
उनका अनुसार एकान्तकुना कार्यालयमा दैनिक एक हजार सेवाग्राही आउँछन्।
'जनशक्ति कम छ, त्यसमाथि कम्प्युटर सर्भरमा समस्या आइरहन्छ। चाप धेरै हुँदा अरू प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व काउन्टर पुग्दा बन्द भइसकेको हुन्छ,' उनले भने।
यातायात कार्यालयले चार बजेसम्मै सेवा दिने गरे पनि बैंक काउन्टर भने जाडोमा दुई बजेसम्म मात्र खुल्ने उनले बताए। राजस्व संकलन काउन्टरले त्यसै दिन हिसाब बुझाउनुपर्ने भएकाले छिट्टै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उनी सजिलै भन्छन्, 'समय धेरै लाग्दा झन्झटिलो त भयो तर भोलिपल्ट आउँदा पनि काम रोकिँदैन।'
सेवाग्राहीले भने एउटै कामका लागि दुई दिन धाउनुपर्ने झन्झट बेहोरिरहेका छन्।
'भोलिपल्ट पनि सजिलो भए त हुन्थ्यो। बिहान चाँडै नआए भोलिपल्ट पनि कहाँ पालो पाउनू!' एकान्तकुना कार्यालयमा भेटिएका विदुरकुमार थापा मगरले भने।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २, २०७८, ०२:४६:००